Zafy albert : Noraisin’ ny fanjakana an-tanana ny fitsaboana azy -
AccueilRaharaham-pirenenaZafy albert : Noraisin’ ny fanjakana an-tanana ny fitsaboana azy
Ny famerenana ny fahamarinan-toeran’ny fahasalaman’ny profesora Zafy Albert no hiompanan’ireo mpitsabo amin’ izao fotoana izao, ary mila arahi-maso akaiky izany . Mikasika ny fitsaboana kosa indray, dia raisin’ ny fitondram-panjakana tarihin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina an-tanana avokoa ny fitsaboana izay atao amin’ny profesora zafy albert, ary izany dia hatramin’ny mety ho fandefasana azy mitsabo tena any ivelany raha ilaina. Noho izany dia miankina betsaka amin’ny fivoaran’ny fitsaboana izay atao, na ihany koa ny fahasalamany no handefasana azy hitsabo tena any ivelany na tsia. Tetsy amin’ny hopitaly tetsy Befelatanana moa no nitondran’ny fianakaviana azy, taorian’ ny tranga izay niseho tao an-tranony. Noho ny toe-draharaha ara-pahalasamana izay misy eto amin’ ny firenena kosa dia nisy ny fandraisana fepetra, ary antony namindrana azy tetsy amin’ny hopitaly tsy miankina iray etsy Ilafy
Hatramin’ny ora hanoratanay izao, dia fantatra fa mbola manaraka fitsaboana eny amin’ny hopitaly tsy miankina iray eny Ilafy ny profesora Zafy albert, ary mbola ao amin’ny trano fameloman’aina. Raha ny fantatra ihany koa dia mbola tsy nahatsiaro tena hatramin’ny hariva teo ny profesora, ary mbola arahi-maso akaiky ny fahasalamany, ny fiakaran’ny tosi -dra ambony, ka izany no anisan’ny mety niteraka fahatapahana lalan-dra ihany koa. Raha ny fantatra dia ny maraina tokony ho tamin’ny enina ora teo ho eo , izany hoe efa nifoha ny profesora no nilaza fa misy tsy azoazony ao amin’ny lohany, na io ilay antsoina amin’ny teny vahiny hoe “malaise”. Taorian’izay no tsy nahatsiaro tena ny profesora, ary noentina haingana teny amin’ny hopitaly Befelatanana, avy eny kosa no namindra azy ho eny amin’ny tsy miankina iray etsy Ilafy. Hatreto dia mbola arahi-maso akaiky ny fahasalaman’ny profesora Zafy Albert. Filoham-pirenena taorian’ ny hetsi-bahoaka ny taona 1991 ny profesora zafy Albert, sady filoha voalohan’ ny repoblika fahatelo, marihina ihany koa fa anisian’ny filoham-pirenena niala teo amin’ny toerana , tsy nandeha nitsoaka tany ivelany ny profesora Zafy Albert. Amin’ny asa maha profesora azy moa, dia manam-pahaizana amin’ny fandidiana fo ny profesora Zafy Albert.